ချင်းရွှေဟော်ဂိတ်ကို နယ်စပ်ဝင်/ထွက်ပေါက်အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ပါက ကန့်ကွက်ရန်မရှိဘဲ ပူးပေါင်းဆော? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ- ရှမ်းပြည် နယ်မှချင်းရွှေဟော်ဂိတ်အား အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်စပ် ဝင်/ထွက် ပေါက်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပါက ကန့်ကွက် ရန်မရှိ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အ သင့်ရှိကြောင်း အလုပ်သမား၊ လူ ဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်က ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ဒီဇင်ဘာ၃ဝရက်ကကျင်းပ သည့် ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦးမြင့်ဆွေ ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနှင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ တွင် ယင်းကဲ့သို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေက ”အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက်က ထိုင်းနဲ့ပဲ နှစ်နိုင်ငံ လက်မှတ်ရေးထိုးရပါသေးတယ်။ တာချီလိတ်၊ မြဝတီ၊ ကော့သောင်း၊ ထီးခီးဒေသတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်ထွက်ပေါက်မဟုတ် ဘဲ နယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက်ကတော့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှာရှစ်ခုရှိပါ တယ်။ လာအို-မြန်မာနယ်စပ်မှာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်- မြန်မာနယ်စပ်မှာ လေးခုရှိပါတယ်။ TBP, BP နဲ့ပဲ လောလောဆယ်ဖြတ် သန်းခွင့်ပြုနေပါသေးတယ်။ ပျမ်းမျှ အားဖြင့် ချင်းရွှေဟော်စခန်းဟာ တစ်လမှာ တရုတ်နိုင်ငံသားလေး ထောင်လောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်သောင်းလောက် ဝင်ထွက်မှုရှိ ပါတယ်။ ဒီချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂိတ်ဖွင့်မယ်ဆို ရင် ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကန့်ကွက် ဖို့မရှိပါဘူး။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပေးဖို့အသင့်ရှိပါတယ်”ဟု ယင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြား သည်။
ယင်းနယ်စပ်ဝင်ထွက်ပေါက် များကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်ထွက် ပေါက်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်ဆိုပါက နှစ်နိုင်ငံအကြားတွင် တင်းကျပ်သော နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ချက်၊ နယ်မြေအလိုက် လုံခြုံရေးအာမခံချက်၊ ဒေသတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်း မွန်ပြီး နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက် ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်း ဆွေက ”အဲဒီဒေသကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဝင်ထွက်ပေါက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်ဆိုရင် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်တိုင်းကနေမှ ပြည်ထောင်စု အစိုးရကိုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည် ထောင်စုအစိုးရကမှ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး ဌာနတွေရဲ့ သဘောထားမှတ် ချက်တွေတောင်းမယ်။ အားလုံးက ကန့်ကွက်ရန်မရှိဘူး။ လုံခြုံရေးအရ လည်း အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လုံခြုံ ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီကို တင်ပြ ပြီး အဲဒီကနေမှသမ္မတရုံးကိုတင်ပြ ပါမယ်။ အဲဒီနောက် နှစ်နိုင်ငံနိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနချင်း သဘောတူ ညီချက်ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ခွင့်ပြုလို့ရ မယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ အနေအထားကတော့ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ရှစ်ခုလုံးမှာ အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာဝင်ထွက်ပေါက်အဖြစ် ဆောင် ရွက်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး”ဟု ပြော သည်။
လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရထားသူအချင်းချင်းဖေးမမှုမရှိ၊ ပြည်သူကို လက်တွဲခေါ်ယူလိုစိတ် မရှိလျှင်ြ??
အဆင့် – ၉ နေရာအထိ ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် နည်းပြ လိုပီတီဂွီကို ရီးရဲလ် ထုတ်ပယ်၊ စည်းမျဉ်းများအရ နည